Global Voices teny Malagasy » Printsy ao Zeorzia Miomana Handray Fanjakana Eo Amin’ny Faha-Dimin’ny Taonany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Avrily 2017 15:28 GMT 1	 · Mpanoratra Eurasianet Nandika miora
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Zeorzia, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Ity manaraka ity dia lahatsoratra mpiaramiasa  avy amin'ny EurasiaNet.org  nosoratan'i Tamar Kikacheishvili . Naverina navoaka rehefa nahazoana alàlana.
Amin'ny ankapobeny dia noho ny Patriarka IIia II, mpitarika ny Fiangonana Ortodoksa Zeorziana, no tena nahazoan'ny Printsy Giorgi izay toerany izay, ny patriarka izay tamin'ny 2007 niantso an'i  Zeorzia hisafidy fitondram-panjaka iray manaraka lalàm-panorenana. Tamin'izany fotoana izany, anefa, nisy vato nisakana: tsy nisy mpandova mazava. “Tokony hofidiana avy any anatin'ny fianakavian'ny mpanjaka ireo kandidà handray ny satro-boninahitra, ary efa hatrany amin'ny fahazazàny izy no atsangana ho mpanjaka,” hoy i Ilia tamin'izay fotoana izay.
Tsy mbola nifankahafantatra izy roa talohan'ny nikarakaran'ilay patriarka ny mariazin'izy ireo, hoy i  Mamuka Bagrationi, havana lavitr'i Giorgi sady vahinin'ny fandaharana anaty fahitalavitra momba ireo olana mifandraika amin'ny fianakavian'ny mpanjaka. “Zavatra tena mahazatra ao anatin'ny fianakaviamben'ny mpanjaka io manao sorona ny fiainan-dry zareo manokana io mba ho tombontsoan'ny firenena,” hoy i Bagrationi tao anaty tafa iray ho an'ny EurasiaNet.org.
Tamin'izany fotoana, anefa, niteraka an'i Giorgi ry zareo. Tamin'ny 2011 izy no teraka ary ilay patriarka ihany no nanao batisa azy tao amin'ny Katedralin'i Svetitskhoveli ao Mtskheta, toerana efa fanosorana ireo mpanjaka Zeorziana hatry ny fahagola. Mpandraharaha sangany sy mpikatroka tsy tia pelaka ary mpanohitra ny liberaly ny iray amin'ireo dadabeny, Levan Vasadze .
“Fotoana lehibe tokoa ny hoe taorian'ny roanjato taona dia nisy zaza iray nohosorana ho mpanjakan'i Zeorzia,” hoy i  Ilia .
Mampiseho ny fanabeazana tsy manam-paharoa azony ny sasany amin'ireo sarin'i Giorgi ao amin'ny Facebook. Matetika mitafy ny chokha nentindrazan'ny Zeorziana izy , ary mazàna no azo sary miaraka amin'ny patriarka.
Tsy ho ela izy dia hanomboka hianatra ny khridoli , haiady nentindrazan'ireo Zeorziana izay nanomboka nifoha indray ao amin'ny firenena. “Mitaiza fahaizamanao isankarazany izy io, toy ny fifantohan-tsaina, ny fandanjalanjàna ary ny faharetana,” hoy i Bagrationi.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/26/98704/
 lahatsoratra mpiaramiasa: http://www.eurasianet.org/node/83256
 niantso an'i: http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav101207a.shtml
 hoy i: https://www.youtube.com/channel/UCqXBfOWegZAZrcMXP3zfMag
 hoy i: https://www.youtube.com/watch?v=VG1nXORomes
 chokha nentindrazan'ny Zeorziana izy: http://www.eurasianet.org/node/62926